« Logiciel » ampiasain’ny CENI : Mandalo fitsirihana mandritra ny telo andro -
AccueilSongandina« Logiciel » ampiasain’ny CENI : Mandalo fitsirihana mandritra ny telo andro
« Logiciel » ampiasain’ny CENI : Mandalo fitsirihana mandritra ny telo andro
Nanomboka omaly, ary haharitra telo andro ny fitsirihana ny « Logiciel » ampiasain’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, amin’ ny fanisam-bato mandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa amin’ny faha-19 ny volana desambra izao. « Natao hanalana ny ahiahin’ny kandidà mpifanandrina amin’ ny fifidianana fihodinana faharoa izao ezaka izao » hoy Hery Rakotomanana filohan’ny CENI.
Mandritra ny fitsirihana dia malalaka ireo solontenan’ny kandidà, miaraka amin’ ireo teknisiana avy amin’ izy ireo, hitsirika sy hanao andrana ary hametraka fanontaniana mahakasika ny fikirakirana izany « Logiciel »izany. Ankoatra ireo solontena isaka ny kandidà, dia nandefa solontena ihany koa ny avy eo anivon’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana hanatrika ny fizahana ireo fitaovana informatika sy ny fampiasana azy. Mazava ho azy fa manaraka akaiky ny fitiliana atao ihany koa ireo solontena avy amin’ ny vondrona iraisam-pirenena sy ny teknisianina avy amin’ ireo fiarahamonim-pirenena, nasaina manokana hanatrika ny fitsirihana, izay tsy hifarana raha tsy amin’ ny zoma ho avy izao. Marihina fa ny « logiciel » izay ampiasain’ny SRMV, na ny rantsa-mangaika ny CENI eny anivon’ ny distrika, sy ny « logiciel » ampiasain’ny CENI foibe dia handalo izay fitsirihana izay avokoa.
Nambaran’ ny filohan’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana nandritra ny kabary fanokanana omaly tetsy amin’ny biraon’ izy ireo tetsy Nanisana, fa « noraisina avokoa ny tsikera avy amin’ireo kandidà mpifaninana nandritra ny fifidianana dingana voalohany, ary koa ny tsikera entina hanatsarana ny fomba fiasan’ny CENI. Tsapanay fa raha tiana ny hanatanteraka fifidianana eken’ny rehetra, ilaina ny mangarahara tahaka izao hetsika ataon’ ny CENI izao ». Tsy nijanona teo anefa ny fanentanana nataon’ny filohan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, Hery Rakotomanana, fa niantso ny rehetra hifanome tanana sy hiara-hiasa ihany koa ny tenany « amin’ ity fihodinana faharoa ity, dia hamafisina ny fiaraha-miasa miaraka eo amin’ ny delegen’ ny kandidà eo ambany fanampian’ireo teknisianina iraisam-pirenena » hoy izy. Nomarihin’ ny filohan’ ny CENI nandritra ny kabary fanokafany ny fitsirihana ny fikirakirana ny informatika ampiasain’izy ireo, fa « avela malalaka ianareo solontenan’ny kandidà, hanadihady ary hanontany ireo teknisianina mandritra ny fitsirihana ».
Ny faran’ny herinandro lasa teo no fantara fa efa nisy ny fivoriana izay natrehin’ ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta manoloana ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara « efa raharahan’ny governemanta ity resaka tsy fandriampahalemana ity fa ...Tohiny